पछाडिबाट रामदाईले मेरो कट्टु तानिदिए, सबै गाउँले हाँसे…(कथा) • Gazzabko Online
पछाडिबाट रामदाईले मेरो कट्टु तानिदिए, सबै गाउँले हाँसे…(कथा)
सुरेश बादल || July 3, 2018 at 4:29 pm
‘दाई तीन रूप्पे खाले झोला छ?’ म पसलेलाई सोध्छु।
‘खै दिनु न त एउटा।’
उनले एउटा बाक्लो प्लास्टिकको चार कुने झोला दिए।
‘कति पैसा दाई?’
‘लिनुस्।’ पैसा दिँदै म हाँसेँ। उनी पनि मुस्कुराए। अचम्म, तीन रूप्पे खाले झोलाको दाम पनि दश रूपियाँ पुगिसकेछ। हुन त सुका खाले चकलेटको पनि आजकाल एक रूपियाँ पर्छ नि त!
म यादहरूमा पुग्छु। बचपनमा रूमल्छु। दिनभरि पट्यार लाग्छ। शनीबार भएर होला। तुलसाको मठ, पुजाकोठा, हजुरआमाको दराज, बा’को सिरानी सबतिर म सिलोक खोज्छु। केहि सुकाहरू जम्मा पार्छु। ठ्याक्कै चारसुका भएछ।
रमेश अघिनै एक रूपेको डबल लिएर बजार जान रेडि थियो। मैले पनि हात्तीछाप चप्पल लगाएँ।
आमाले चिया खाएर जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म खान्न भनेर कुदेँ।
पुल तरेर बजार पुग्दा मन चंचल भयो। गुच्चा पसलमा भीड थिएन। खल्तीमा तीनवटा मात्र सुका रै’छ। एउटा हराएछ। रमेशले चारवटा गुच्चा किन्यो। मैले तीनसुकाको तीनवटा मागेँ। पसलेले दिएन। एक रूपेभन्दा कमको व्यापार नगर्ने रे!
पल्लो पसलमा ‘चन्दा मामाका गुब्बारा’ लेखिएको प्लास्टिक झुण्डेको थियो। होली आएछ।
मैले तीनसुकाको बेलुन मागेँ। पसलेले दियो।
अलिपर आएर बेलुन फुकेँ। तीनवटैमा पींधमा प्वाल परेको रै’छ।
‘बिक्रि भा’को सामान फिर्ता हुँदैन। तेरो भाग्य नै त्यस्तै रै’छ।’ पसले बोल्यो।
म फुटेका बेलुन टोक्दै हिँडिरहेँ। रमेश गुच्चा छंग छंग बजाउँदै हिँडिरह्यो।
हामी पुलको बीचमा उभियौँ। बगिरहेको खोलामा निहुरिएर हेरिरह्यौँ। पुल सरेजस्तो लाग्यो। हामीलाई गाडि चढेजस्तै मजा आयो। हामी निकैबेर पुलमा उभिएर गाडि चढिरह्यौँ।
‘गाडि चढ्दा त बान्ता आउँछ।’ एकदिन पुरेतबा’ले गफ लगाएका थिए। उनले चारचोटि गाडि चढिसके रे!
साँझमा हाम्रै घर तल डोजर देखियो। पहेँलो रंगको डोजरले आँगन र खेतहरू ताछेर बाटो बनाउँदै आएको थियो। डोजर हेर्न गाउँलेको भीड लागेको थियो। पछाडिबाट रामदाईले मेरो कट्टु तानिदिए। सबै गाउँले हाँसे। मलाई लाज भयो।
भोलीपल्ट डोजर हाम्रै घरछेउमा आइपुग्यो। हाम्रो आँगन खनेर बाटो बनायो। हजुरबा’ले डोजरलाई यता घुम उता घुम भन्नुभयो। डोजर घुम्यो। कस्तो बुझ्ने मिसिन। ज्या डोजरभित्र त मान्छे पो रैछ!
रामदाई पर उभिएर डोजर हेर्दै थिए। मलाई बदला लिन मन लाग्यो। मैले पनि पछाडिबाट उनको कट्टु तानेर भागेँ। सबैजनाले मुख छोपे। रामदाई लाजले रातो भए। मलाई लखेट्दै आए।
सुविन भट्टराईको ‘प्रिय सुफी’ विमोचन
घरमा सामान किनेर ल्याएको प्लास्किट कति ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?, यो पढ्नुहोस् चाखलाग्दो कथा
अप्रिल फुल (एउटा गज्जबको मायालु कथा): बुद्धिसागर